समाज Archives | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - समायोजन नहुँदासम्म कर्मचारीको सरुवामा रोक !
समायोजन नहुँदासम्म कर्मचारीको सरुवामा रोक !
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन सम्पन्न नभएसम्म सरुवासम्बन्धी कार्यलाई स्थगित गरेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव अनिता निरौलाले कर्मचारी समायोजन शुरु भएकाले समायोजन नसकिदासम्म सरुवासम्बन्धी कार्यलाई स्थगित गरेको जानकारी गराए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार अध्यादेश स्वीकृत गरेका थिए । मन्त्रालयले सरकारी सेवाका कर्मचारीको विवरण १५ दिनभित्र अद्यावधि गर्न सबै निकायलाई पत्राचार गरिसकेको उनले जानकारी गराएका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
जनकपुरमा ड्रोनको गस्ती, ५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन
जनकपुर । सीताराम विवाह पञ्चमी महोत्सवमा भारतको अयोध्याबाट औपचारिकरुपमा जन्ती घोडा, रथ, उटसहितमा आइपुगेका छन् ।विवाह पञ्चमीको अवसरमा भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ आउने भएपछि जनकपुर क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ आउने भएपछि जनकपुरको सुरक्षा व्यवस्थाको लागि अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ । विवाहपञ्चमी महोत्सवमा मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ भगवान रामको जन्तीको प्रतिनिधित्व गर्दै जनकपुर भोलि आउने छन् । यसपालि विवाह पञ्चमी महोत्सवमा १० लाख भन्दा बढी संख्यामा श्रद्धालु भक्तजन आउने अनुमान गरिएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
उपत्यकामा दिनहुँ जसो तापक्रम घट्दै, चिसो बढ्दै
काठमाडौं । काठमाडौंको तापक्रम मंगलबार ४ डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ । सोमबार ५ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौंको न्युनतम तापक्रम आज ४ डिग्रीमा झरेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । काठमाडौंसहित देशैभरि जाडो बढ्दै गएको छ । दिनहुँजस्तै तापक्रम घट्न थालेपछि चिसो बढेको मौसमविद्ले जानकारी दिए। आज पूर्वी पहाडी भेगमा भने हल्का पानी पनि पर्न सक्ने सम्भावना छ । आज राति पहाडी र उच्च हिमाली भेगमा हिमपातकोसमेत सम्भावना रहेको उनले जानकारी दिए ।	थप पढ्नुहोस्
मौलाथरमा बाउबाजेको पालादेखि खानेपानीको समस्या
बेझाड । पाल्पा निस्दी गाउँपालिका–४ मित्याल मौलाथरका स्थानीयवासी अझै पनि घण्टौँ समय बिताएर खानेपानीको जोहो गर्न बाध्य छन् । गाउँमा खानेपानीको स्रोत नहुँदा बिहानदेखि डोकोमा गाग्री बोकेर खानेपानी खोजेर नै यहाँका स्थानीयवासीले वर्षौदेखि जीविका चलाउँदै आइरहेका छन् । बिहान झिसमिसेमै यहाँका स्थानीयवासीलाई डोकोमा गाग्री बोकेर खानेपानीको जोहो गर्न घण्टौँ भौतारिनु परेको छ । बाउबाजेको पालादेखि नै घण्टौँ समय लगाएर पानी बोक्ने समस्या अहिलेसम्म उस्तै रहेको मौलाथरका उदयराम सोती बताउछन् ।	थप पढ्नुहोस्
विवाह पञ्चमी : आज मटकोर, भोली स्वयंवर !
धनुषा । जनकपुरधाममा आयोजना भईरहेको साताव्यापी रामजानकी विवाह पञ्चमीको आज पाँचौं दिन मटकोरको विधि हुँदैछ । सोमबार तिलकोत्सव सम्पन भएको थियो । महोत्सवको पहिलो दिन नगर दर्शन, दोस्रो दिन फुलबारी लीला, तेस्रो दिन धनुष यज्ञ, चौथो दिन तिलकोत्सव सम्पन भएको छ भने आज पाँचौँ दिन मटकोर र छैठौं दिन मंसिर २६ गते राम–सीता स्वयंवर तथा विवाह महोत्सव कार्यक्रम हुनेछ । भगवान रामको पक्षबाट राम मन्दिरका महन्थ र सिताको पक्षबाट जानकी मन्दिरका महन्थ अभिभावकको भूमिकामा छन् । सोमबार सम्पन्न तिल्कोत्सवमा सीता पक्षबाट विभिन्न प्रकारको सौगात 'भार' लिएर राम मन्दिरमा लगिएको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
सप्तरीमा घर जल्यो, १० लाखको क्षति !
लहान । विद्युत् सर्ट भएर सोमबार साँझ सप्तरीको बोदे बसाइन नगरपालिका–१ स्थित धनगढीमा आगलागी हुँदा करीब १० लाख बराबरको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ । स्थानीय सत्यनारायण साहको घरमा विद्युत् सर्ट भएर साँझ ६ बजेतिर भएको आगलागीमा उनको दुई वटा घर, स ४ प ४१९३ नम्बर मोटरसाइकल, नगद रु. ८० हजार, एक थान सोनी कम्पनी कम्प्युटर, एक थान टिभी तथा धान, चामल, गहुँ लगायतका सम्पूर्ण समान जलेर नष्ट भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बोदे बसाइनले जनाएको छ । प्रहरी र स्थानीयवासीको प्रयासमा आगो नियन्त्रणमा आएको जनाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
झापा । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको दिवसको अवसर पारेर भूटानी शरणार्थीले स्वदेश फिर्ती र राहतको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । शरणार्थी समस्या सुल्झाउन दबाब पु¥याउने उद्देश्यले शरणार्थीहरुले शिविरमा प्रदर्शन गरेका हुन् । शिविरमा दातृ निकायको सहयोगमा शिविर व्यवस्थापन समितिले गरेको कार्यक्रमलाई लक्षित गरी प्रर्दशन गरिएको भुटानी रिकन्सिलेसन कमिटी भुटानका संयोजक कृष्णवीर तामाङले बताए । प्रदर्शनका क्रममा स्वदेश फर्कन चाहने शरणार्थीले कार्यक्रममा आएका दातृ निकाय उच्च पदाधिकारी, मानव अधिकारकर्मी समक्ष आफ्ना माग पूरा गर्न अनसनसमेत छन् ।	थप पढ्नुहोस्
जथाभावी गरिएका टिप्पणीले न्यायालय कमजोर भयो !
झापा । प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अनावश्यक रुपमा गरिने टिप्पणीले न्यायालय कमजोर हुने बताएका छन । नेपाल बार एशोसिएशनले आज यहाँ आयोजना गरेको मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधान न्यायाधीश मिश्रले भने, “अदालतमा विकृति मौलायो, भ्रष्टाचार भयो भनेर मात्रै हुँदैन, कसले कहाँ कति लियो, त्यो पनि उजुरी गर्नुपर्छ ।” न्यायालयलाई विकृतिमुक्त बनाउने अभियानमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उनले सुझाए । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निर्भिकताका लागि नेपाल बार एशोसिएशनको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए ।	थप पढ्नुहोस्
तनहुँ । मुढा बुनेर तनहुँका कैदीबन्दीहरुले आय आर्जन गर्न थालेका छन् । विभिन्न कसुरमा जेल सजाय भोग्दै आएका तनहुँ कारगारका कैदीबन्दीले फुर्सदको समयको सदुयोग गर्दै मुढा बिक्री गरी आत्मनिर्भर बनेका छन् । कैदीबन्दीले आ–आफूले जानेको सीपको सदुपयोग गर्दै मुढा बुन्ने कार्यमा सहभागी भएर मुढा बिक्रीबाट भएको आम्दानीले घरपरिवारलाई खर्चसमेत पठाउँदै आएका छन् । तनहुँ कारागारमा केही कैदीबन्दीले मुढा कम्पनी नै खोलेर सबै कैदीबन्दीलाई रोजगारीको वातावरण सिर्जना गराएको कैदीबन्दीका नाइके नरबहादुर थापाले जानकारी दिए ।	थप पढ्नुहोस्
यौन व्यवसाय गर्ने १८ जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । काठमाडौंको बौद्ध क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा यौन व्यवसाय गर्ने १८ जनाविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ ।प्रहरीले यौनधन्दामा संलग्न रहेको आशङ्कामा तीन होटल सञ्चालकसहित १८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको महानगरीय प्रहरी वृत बौद्धका प्रहरी नायब निरीक्षक नरेन्द्र चन्दले जानकारी दिए। होटलमा यौन व्यवसाय चलाएको आशङ्कामा नारायणटारकी होटल सञ्चालन ३० वर्षीया अञ्जली तामाङ, २८ वर्षीय चन्द्रबहादुर गोले र जम्मुडाँडाबाट २७ वर्षीया अस्मिता थापामगरसहित १४ महिला र चार पुरुषविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो ।	थप पढ्नुहोस्